စောဘာဘလူဂေး ဈာပန တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ပြုလုပ်မည်။
ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်မြို့ ၊ှုငပုတောမြို့ နယ် ကျပဲဆင်ချောင်းအုပ်စု ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာနေ ကမားလူအသင်းတော်မှ စောလှစိန်+နော်ဆဲဖေါ တို့၏ အကြီးဆုံးသားဖြစ်ပြီး မလေးရှားရောက်ပြီး(၃)ရက်မြောက်နေ့တွင် အစွန်းရောက်လူတစု၏ တိုက်ခိုက်ရိုက်နှက်မှုကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
သူ၏ နောက်ဆုံး ဈာပနအခမ်းအနားကို Kepong နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး K4K အဖွဲ့မှ ပဒိုစောဖါးတို့အဖွဲ့လည်း စောဘာဘလူးဂေး၏ ရုပ်အလောင်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။
Saw Bar Blu Gay
မလေးရှားရောက်သည့် ရက် ...............၂၉.၅.၂၀၁၃
အကြမ်းဖက်ခံရသည့် ရက် ...............၁.၆.၂၀၁၃ (ညနေ ၆နာရီ)
ခရစ်တော်တွင် ထာဝရအိပ်စက်သည့်ရက်..... ၈.၆.၂၀၁၃
ဈာပနအခမ်းအနား ......... ၂၁. ၆- ၂၀၁၃
တိုက်ခိုက်ခံရသည့်နေရာ....... Selanyang ဈေးအနီး
တက်ရောက်သည့်ဆေးရုံ - Selanyang hospital, KL
ကိုးဒီသွေး at 12:37 AM
Anonymous June 23, 2013 at 2:11 AM
Hello....Thanks post news our Karen died i very sad thanks helping Saw Bar Blu Gay God Bless You All !
၁ တဖန်တုံ ယေရှုက၊ သင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိစေနှင့်။ ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြလော့။ ငါ့ကိုလည်းယုံ ကြည်ကြလော့။
၂ ငါ့အဘ၏ အိမ်တော်၌ နေစရာအခန်းအများရှိ၏။ သို့မဟုတ်လျှင် မဟုတ်ကြောင်းကို သင်တို့အား ငါမပြောဘဲမနေ။ သင်တို့နေစရာအရပ်ကို ပြင်ဆင်ခြင်းငှါ ငါသွားရ၏။
၃ ငါသည်သွား၍သင်တို့နေစရာအရပ်ကို ပြင်ဆင်ပြီးမှ တဖန်လာပြန်၍၊ ငါရှိရာအရပ်၌ သင်တို့ရှိစေခြင်းငှါ သင်တို့ကိုငါ့ထံသို့ သိမ်းဆည်းမည်။
၁ ယာယီတဲဖြစ်သောငါတို့ မြေအိမ်သည်ပျက်လျှင်၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ လူလက်ဖြင့် မလုပ်ဘဲ၊ ဘုရားသခင်ဖန် ဆင်းတော်မူသော နိစ္စထာဝရ အိမ်ရှိကြောင်းကို ငါတို့သိကြ၏။
saw chit htwe June 23, 2013 at 7:02 PM
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 12:47 AM